Tea Circle Event: “The Coup Won’t Eradicate Our Future” | ငါတို့အနာဂတ် ငါတို့ပြန်ပေး
Event: August 3, 8-9:30 PM MMT
သြဂုတ်လ ၃ ရက်၊ မြန်မာစံတော်ချိန် ည ၈ နာရီကနေ ၉:၃၀ နာရီခွဲ။
Registration is required to attend this event. RSVP here: https://bit.ly/3iUnjcU
Tea Circle presentsaconversation between Myanmar’s youth protest participants & leaders, moderated by youth advocate and activist Ma Thinzar Shun Lai Yee. (Discussion will take place in Burmese)
စစ်အာဏာသိမ်းမှု ဆန့်ကျင် ဆန္ဒပြပွဲတွေမှာ လူငယ်တွေရဲ့ အခန်းကဏ္ဍအကြောင်း ဆွေးနွေးဖလှယ်သွားဖို့ လက်ဖက်ရည်၀ိုင်းက စီစဥ်ထားပါတယ်။ ဒီစကား၀ိုင်းကို လူငယ်အရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူ မသဉ္ဇာရွှန်းလဲ့ရည်က တာ၀န်ယူတင်ဆက်မှာပါ။
1. Medical Doctor and leader in Mandalay’s demonstrations
၁။ ဆရာ၀န်တဦးဖြစ်တဲ့ မန္တလေး ဆန္ဒပြခေါင်းဆောင်။
2. A Chin health worker, CDM organizer and member of the armed resistance.
၂။ အာဏာဖီဆန်ရေး စီဒီအမ်လှုပ်ရှားမှုမှာ ပါ၀င်ပြီး လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ဖို့ ပြင်ဆင်နေတဲ့ ချင်းတိုင်းရင်းသူ ကျန်းမာရေး၀န်ထမ်းဟောင်း။
3. Gen Z university student and Yangon-based protester
၃။ ရန်ကုန်က ဆန္ဒပြပွဲတွေမှာ ပါ၀င်ခဲ့တဲ့ Gen Z တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား။
Participants will remain unnamed for their security.
မှတ်ချက် – ဆွေးနွေးမယ့်လူတွေရဲ့ လုံခြုံရေးကြောင့် သူတို့နာမည်ကို ဒီမှာ ဖော်ပြမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
Posted in AnnouncementTagged CDM, Chin, coup, event, youth activism
Prev Myanmar’s post-coup Internet: dangers and alternatives
Next အာဏာမသိမ်းမီနှင့်အာဏာသိမ်းပြီးကာလ မြန်မာနိုင်ငံတွင် စိတ်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်မှုများ